SAAR SAARAYAASHA IYO SOO SAARAYAASHA - Shiinaha Wershad kale
BONOVO heerka sare ee baaldi clamshell ilaalinta xidhashada goobta dhismaha
Bonovo Clamshell baaldi oo loogu talagalay qodayaasha qashinka waxaa loogu talagalay dib-u-habeynta iyo qashin qubka.
Waxaa loo qaybiyay noocyo fudud, heer, iyo culeys culus iyo muujinta wareeg 360-shaabad xiran, cutubyada sidoo kale waxaa loo heli karaa codsiyada deegaanka.
BONOVO adeegsiga u adkaysta adeegsiga OEM ODM baaldi shaqo burburiyey oo shaqeynaya muddo dheer
Bonovo Crusher Bucket waa jawaab cusub oo loogu talagalay in lagu burburiyo shuruudaha goobaha shaqada maanta. Iyadoo la adeegsanayo qalabka wax lagu burburiyo baaldiga, dhammaan noocyada wax dumiya ee aan burburin waa la burburin karaa oo dib loogu isticmaali karaa goobta. Nidaamkani wuxuu u baahan yahay qalab farsamo yar, gaadiid yar iyo kharashka qashin qubka iyo hal hawl wade oo ka shaqeeya lifaaqa duminta iyo sidoo kale baaldiyaha wax lagu burburiyo.
BONOVO baaldi wax lagu qodo oo tayo wanaagsan leh ayaa lagu qabtaa meheradaha ku lifaaqan
Bonovo Grab Bucket waa baaldi aad u adkeysi badan, baaldi si xoog leh loo dhisay oo leh 'suulka' oo lagu rakibay shaqooyin dheeri ah. Waa fikrad aad u horumarsan, oo sifiican uga horaysa wax soo saar kasta oo kale oo suuqa yaal, maxaa yeelay waxay u saamaxaysaa wadaha inuu soo qaado walxaha oo uu wali ku dhex wareego aagga buuxa ee qodista.